Artist News | Artist Khabar | Page 5
Artist News	जाडोले छुँदैन प्रियंकालाई ? ( ६ तस्बिर)	पुस, काठमाडौं । मंगलबार साँझ राजधानीको कुमारी हलमा चलचित्र लभ सासाको प्रिमियर गरीयो । थुप्रै नेपाली चलचित्र क्षेत्रका आर्टिस्टहरुका माझ गरीएको प्रिमियरमा नेपाली नायिकाहरु निकै सुन्दरी बनेर आएका थिए ।
चलचित्र नायिका केकी अधिकारी, कर्मा शाक्य र आशिफ शाह मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रिमियर शोमा केकीको साथमा ऋचा शर्मा, वेनिशा हमाल, बर्षा राउत,..	‘तिम्रो फिगर कोका कोला’ (तस्बिर)	पुस, काठमाडौं । चलचित्र 'अर्धकट्टी'मा समावेश 'तिम्रो फिगर कोका कोला' गीत हिट गीत हो । चलचित्रले बक्स अफिसमा खासै राम्रो ब्यापार गर्न नसकेता पनि गीतलाई पनि दर्शक तथा स्रोताले निकै रुचाएका थिए ।
साथै यसै चलचित्रमा अभिनय गरेर अझ चर्चामा आएको नायिका हुन् अशिस्मा नकर्मि । 'तिम्रो फिगर कोका कोला'की नायिका भनेरै बजारमा चिनिएकी अशिस्मालाई यस..	पशुपति शर्मा र रमेशराजले फुर्सदमा गरे यस्तो रमाइलो (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । यतिखेर देश भित्र बिभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सवहरु चलिरहेका छन् । पछिल्लो एक महिना त अत्यधिक रुपमा कार्यक्रमहरु भए । त्यो समयमा नेपालका चर्चित आर्टिस्टहरुलाई भ्याई नभ्याई भयो । केहि आर्टिस्टहरु देशभित्रका भईरहेका सबै कार्यक्रममा माग भएका हुन्छन् ।
यस्तै चर्चित आर्टिस्टको रुपमा गायक पशुपति शर्मा पनि गनिन्छन् । नेपाली..	कलाक्षेत्रका सफल जोडी, ऋिषी लामिछाने र सरिता लामिछानेको सौराहा घुमघामका केहि तस्बिर हेरौं	पुस, काठमाडौं । नेपाली कलाक्षेत्रका सफल जोडीको रुपमा चिनिएका ऋिषी लामिछाने र सरिता लामिछाने यतिखेर चितवन सौराहा घुमघाममा छन् । पुरै परिवारका साथमा सौराहा घुम्न पुगेका यी आर्टिस्टहरुहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा केहि तस्बिर पोष्ट गरेका छन् ।
ऋिषी लामिछाने र सरिता लामिछानेको सौराहा घुमघामका केहि तस्बिर हेर्नुस्..	अमृत र सिर्जुले जापानमा ‘ओके छ त’ भन्दै यसरी घन्काए (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । गायक अमृत खाती र गायिका तथा मोडल सिर्जु अधिकारी यतिखेर जापानमा छन् । जापानको बिभिन्न ठाउँमा भइरहेको कार्यक्रमका लागी जापानको टोकियो पुगेका उनीहरु यतिखेर नेपाली कार्यक्रमहरुमा आफ्नो प्रस्तुती दिइरहेका छन् ।
यसैबिच टोकियो सिन्जुकुमा भएको नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनीहरुको चर्चित गीत ओक छ त गाएका छन् । स्टेजमा ओके छ..	कलाक्षेत्रका ६ आर्टिस्ट जसलाई यो बर्ष गुमाउनु पर्यो	पुस, काठमाडौं । भनिन्छ जन्मेपछि एक दिन सबैले मर्नु पर्छ । फरक यति मात्रै हो कि कोहि छिटै यो संसार छाडेर जान्छन् त कोहि ठिला । तर कुनै मरण बिर्सनै नसकिने भैदिन्छ । त्यस्तै भयो नेपाली कला क्षेत्रलाई पनि यस बर्ष ।
यस बर्ष नेपाली कला क्षेत्रले ६ कलाकारलाई गुमाएको छ । नेपाली संगीतका अग्रजदेखि सिनेमाका पर्दामा देखिएका कलाकारसम्म यसै बर्ष हामिले..	आज सबैभन्दा कान्छा निर्देशक सौगात बिष्टको जन्मदिन, जान्नुहोस उनका केहिकुरा	गोपिकृष्ण चापागाई / पुस, काठमाडौं । संसारकै सबैभन्दा कान्छा निर्देशक सौगात बिष्टले आज आफ्नो १० औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । बि.सं २०६३ साल पुस २२ गते जन्मिएका सौगात अहिलेसम्मकै साना निर्देशकको रुपमा चिनिन्छन् । उनले आफ्नो पहिलो निर्देशीत चलचित्र 'लभ यु बाबा' बाट चलचित्रमा निर्देशन यात्रा सुरु गरेका हुन् ।
सौगात घट्टेकुलो स्थित आफ्नो घरमा..	बिष्णुभक्तसँगै नाटकमा अभिनय गरीरहेका रंगकर्मिहरु के भन्छन् ?	गोपिकृष्ण चापागाई /पुस, काठमाडौं । रंगकर्मि बिष्णुभक्त फुँयालको गएको मंगलबार नाटक गर्दा गर्दै बेहोस भएर निधन भयो । राष्ट्रिय नाँचघर जमलमा जम्मा पाँचशो हुनेभनिएको मध्ये दोस्रो दिनको दोस्रो शो गर्दै गर्दा उहाँको ७९ बर्षको उमेरमा असामाहिक निधन भयो ।
साथै बुधबार उहाँको पार्थिव शरिरलाई प्रज्ञाभवन कमलादीमा राखियो र सयौं कलाकर्मि तथा..	बिष्णुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली दिन आर्टिस्ट देखि चर्चित नेता सम्म (फोटो फिचर)	पुस, काठमाडौं । ७९ बर्षिय आर्टिस्ट बिष्णुभक्त फुँयालको मंगलबार बेलुकी नाटकमा अभिनय गर्दा गर्दै बेहोस भएर निधन भयो । बुधबार उनको पार्थिव शरिरमा श्रृद्धाञ्जली दिनका लागी सयौं आर्टिस्ट देखी चर्चित नेतासम्म नेपाल प्रज्ञाभवन प्रतिष्ठानको परिसरमा पुगेका थिए ।
उनको शवलाई काठमाण्डौको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म..	बिष्णुभक्त फुँयालसँगको अन्तिम अन्तर्वार्ता, निधन हुनुभन्दा १ घण्टा अघि यसरी बोलेका थिए (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । आर्टिस्ट बिष्णुभक्त फुँयालको मंगलबार असामायिक निधन भएसँगै आर्टिस्ट खबर डटकमले उनीसँग सम्बन्धित बिभिन्न सामाग्रीहरु प्रसारण गर्दै आएको छ । यससँगै बिष्णुभक्तको ज्यान जानुभन्दा १ घण्टा अघिको समयमा उनीसँग गरीएको कुराकानी हामी तपाईलई देखाउँदैछौं ।
तलको भिडियो नाटक शुरुहुनु भन्दा केहि समय अघिको मात्र हो । त्यो समयमा..	Pages:«12345678...46»